Semalt: 10 Mahatsiaro tena miavaka amin'ny FMiner, fitaovana maoderina matevina
FMiner dia fitaovana matanjaka sy mahasoa ho an'ny tranonkala, web crawling or indexing, screen scraping sy macro fanohanana ho an'ireo mpampiasa Mac OS X sy Windows. Ity programa mora ampiasaina ity dia mampifandray ireo endri-piraketan'ny sokajin-taonan'izao tontolo izao ary ny drafitra hita maso.
Na tsy maintsy mametraka pejy maromaro maromaro ianao na mila manao tetikasa fanangonana tahirin-kevitra izay mitaky ny lisitry ny proxy server sy ny laharana Ajax, ny FMiner dia safidy tsara ho anao! Amin'ny alalan'ity programa ity dia afaka mametraka mora foana ny angon-drakitra tsotra sy sarotra sy ny teknolojia matevina amin'ny aterineto ianao ary afaka manangona angona avy amin'ny tranonkala maro, toy ny tranokala fonenana, ny milina fikarohana, pejy jiro, ny finday, ny sehatra an-tserasera ary ny vokatra katalaogy.
Raha manao tetikasa izay mitaky fanavaozana tsy tapaka sy eo no ho eo ianao dia hamela ny famaritana ny fandaharam-potoana isaky ny fandaharam-potoana ny FMiner. Ny sasantsasany amin'ireo endrika tena manan-danja indrindra dia voafaritra etsy ambany.
1. Safidy Visual Editor
Azonao atao ny mamolavola tetikasa fanangonana data amin'ny alalan'ny safidin-tsofin'ny visage ary ahazoana ny angon-kevitra tianao ao anatin'ny 10 minitra.
2. Tsy mila fametrahana
Ny tsotra, ny user-friendly and interactive interface dia mahatonga anao ho mora ny manoratra ireo tapa-kofehy tsy mila code.
3. Ireo singa miavaka
4. Fomba fisafidianana safidy maro samihafa:
Ny FMiner dia manampy anao hamakivaky ny tranonkala ary mampifandray ireo rafitra rohy lehibe, ireo karazan-tsipika mifototra, ny lamina URL ary ny fidirana amin'ny automatique.
5. Teny fanalahidy ny teny fanalahidy:
6. Nokajiana ny singa Data:
Ny mpiasan'ny FMiner no fantatra indrindra
Azonao atao ny manaparitaka ny fampidiran-drakitra amin'ny finday amin'ny rindrambaiko miverimbereran'ny FMiner. Ity fitaovana ity dia hahafahanao mametraka ny pejinao ao amin'ny Google, Bing, ary Yahoo
8. Fandefasana formata:
Ny FMiner dia manohana ny format manan-danja maro toy ny Excel, CSV, HTML, XML, ary JSON ary mamonjy ny angona ao amin'ny tahiry toy ny MySQL, MS SQL, ary Oracle.
Manome toky amin'ny fiarovana an-tserasera amin'ny testiner an'ny FMiner. Izany dia hanakana ny bots / ny spiders tsy hiditra ao amin'ny tranonkalanao ary seha-pifaneraserana ofisialy maotina antoko fahatelo.
10. Proxy sy cookies ho an'ny fahazoana tsy fantatra:
Ny iray amin'ireo singa tsara indrindra amin'ny FMiner dia ny manohana ny proxy sy cookies ho an'ny tsy fantatra anarana. Midika izany fa ny asa rehetra ataonao amin'ny Internet dia tsy voarakitra ary ny adiresy IP anao dia miafina.
Tsy maintsy misafidy ny format malalaka ianao ary avelao i FMiner hanao ny asany. Haka ny angon-drakitra ho anao izany, ary afaka manara-maso ny dingana rehetra ataon'ny fitaovana ianao. Ny safidin-tsofin'ny mpijery FMM dia manala ireo dingana rehetra ary manamboatra ny sarintany azo atao mba hifaneraserana amin'ny pejy web misy. Ankoatra izany, hanome anao amin'ny sary izany mba hahafahanao manara-maso ny kalitaon'ny rakitrao. Ny tahirin'ny FMiner dia voavonjy ao anaty format Excel, SQL na CSV ary nozaraina amin'ny fepetra Source .